င ဝန် န ဒီ: June 2009
မြန်မာနိုင်ငံမှာswine flu ဖြစ်နေပါပြီ..
Myanmar reports first case of swine flu
Myanmar has confirmed its first case of swineaafteraschoolgirl returning from Singapore tested positive for the virus, state radio reported.
Saturday, 27 June 2009 15:28
Myanmar has confirmed its first case of swine fu (H1N1 influenza) afteraschoolgirl returning from Singapore tested positive for the virus, state radio reported on Saturday. The 13-year-old was sent toahospital in Yangon on Friday after showing flu symptoms while at school. Tests carried out on Saturday showed she had been infected with H1N1, Myanmar Radio said. Laos and Cambodia reported their first cases on Wednesday and Thursday respectively. Neighbouring Thailand, which has detected more than 1,200 cases since May 12, reported its first two deaths on Saturday.
swine flu ကိုမြန်မာပြည်မှာ နှစ်ယောက်ခန့်ဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။
စင်ကာပူမှပြန်လာသော ကျောင်းသူလေးကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် သွားရောက်စုံစမ်းသော သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ သူသွားရောက်စဉ် ဆေးရုံကြီးသို့ နောက်ထပ်တစ်ယောက်တွေ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းဝင်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် လို့ ထိုသတင်းထောက်မှပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ညနေ မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားက သတင်းတခုဖတ်ပြသွားတယ်... မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး swine flu တုပ်ကွေးလူနာ ကိုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အထူးအဆောင်မှာ ကုသနေကြောင်း သတင်းကြေငြာသွားပါတယ်....
ထိုဖြစ်ပွားသူရဲ့ မိသားစုနှင့် ထိုသူနှင့် ထိတွေ့ ခဲ့သော သူငယ်ချင်းများကိုလဲ အနီးကပ်ကြည့်ရုနေပီး ထိုသူစီးနှင်လာသော လေယာဉ်ပျံမှ ခရီးသည် ၉ဝ ကျော်နှင့် ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းမှဝန်ထမ်းများကိုလဲ ရောဂါပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးနေပါတယ်။
ယခုလ (၁၉) ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် ရယကအဖွဲ့နှင့် ကြံဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များက သင်္ဘောစက်ပျက်၍ ကမ်းကပ်လာသည့် လူငယ်နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး တဦးအား ငွေပြန်ယူရန်လွှတ်လိုက်စဉ် ကျန်ရစ်ခဲ့သူအား ရိုက်နှက်ရာမှ သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။“(၁၉) ရက်နေ့ည (၇) နာရီလောက်မှာ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ ရယကအဖွဲ့တွေက သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းပြီး ငွေ ၆,၀၀၀ တောင်းတာ၊ အဲဒါ တယောက်က ပြန်ယူရင်း အချိန်မမှီတော့လို့ နောက်မနက် (၂၀) ရက်နေ့ သွားပေးတဲ့အချိန်မှာ ရယကတွေက ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ ပြောတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ပြန်လာတော့ အိမ်မှာလဲ မတွေ့ဘူး၊ နောက်တနေ့ (၂၁) ရက်နေ့မှာ အလောင်းကိုတွေ့တာ” ဟု မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။သေဆုံးသူမှာ ဗလရှင် (ခ) မောင်အောင်ထွန်းဖြစ်ပြီး သူနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံရသူမှာ တင်ထွန်းလွင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသေဆုံးသူ၏ အလောင်းကို အမှတ် (၁) ရက်ကွက်ပိုင် ရေခဲစက်နှင့် ဆားစက်အကြားတွင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။“သူ့အလောင်းကိုတွေ့တော့ သွေးအိုင်ထဲမှာ၊ ခေါင်းက နောက်ပိုင်းကြေနေတယ်၊ ဘေးနားမှာ တုတ်တချောင်းလဲ တွေ့တယ်၊ ရိုက်တဲ့သူတွေကို နာမည်တော့မသိဘူး၊ ဖမ်းထားတုန်းက အဖွဲ့စုံပဲ၊ အမှုဖွင့်ထားတာ သက်ဆိုင်ရာက စုံစမ်းပေးမယ်ပဲ ပြောတယ် ဒီကိစ္စကို ကျမတို့ လုံးဝမကျေနပ်ဘူး” ဟု သေဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်က ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့ မောင်အောင်ထွန်းသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိသားစုဝင်များက အသည်ကြီးရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားသော်လည်း အာဏာပိုင်များဘက်မှ ယနေ့အထိ တစုံတရာ အကြောင်းအကြားခြင်းမရှိကြောင်း ဆက်ပြောသည်။သေဆုံးသွားသူ မောင်အောင်ထွန်းမှာ ပုသိမ်မြို့ စိန်ကုန်းတိုးချဲ့ရပ်ကွက် အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ အာဏာပိုင်များက အပြစ်မဲ့ပြည်သူတဦးကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံဦးက ပြောဆိုသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:26 PM No comments:
Problems Accessing Google In China
Sky's Martin Stanford speaks to Olly Mann from answermethis.wordpress.com, about the stories moving up across the internet. Including why you might have problems accessing Google in China.
Confirmed: Michael Jackson Has Died
It has been confirmed that singer Michael Jackson has died. Sky's Robert Nisbet reports onastatement fromaclose friend of Jackson's, Reverend Al Sharpton, who has called for people around the world to pray for him and his family in the hour.
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:05 AM No comments:
Iran confessions 6:29
CNN Senior Editor for Middle East Affairs Octavia Nasr updates the situation in Iran.
Mother accepts heroin antidote
ITN's Andy Davies shares the story ofamother of three heroin addicts who will try out the new heroin antidote.
Tesla's electric sports car 2:10
ITN's Benjamin Cohen takes Tesla's new electric roadster foratest drive.
Jackson dies in hospital
The Los Angeles coroner says they will examine Michael Jackson to determine the cause of death.•
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရက ပစိဖိတ်ကျွန်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး မစ်ဆိုင်း (Missile)ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်ကောင်း ပစ်လွှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ပိုင် ဟာဝိုင်ယီကျွန်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုံးကျည်ကာကွယ်တဲ့ စနစ်တွေကိုအခိုင်အမာ အသင့်ပြင်ထားလိုက်ပြီလို့ အမေရိကန်စစ်တပ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ် ဂိတ်စ် (Robert Gates) က အမေရိကန်အစိုးရဟာ မိမိတိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့ထုတ် ဒေးလီး ယိုမီယူရီ (Daily Yomiuri) လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်သတင်းစာမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီး တာဝေးပစ် မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေ ပစ်လွှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
မေလ ၃၀ ရက်နေ့တုန်းက တေပိုဒွန် ၂ (Taepodon 2) ဒုံးကျည်တစင်းနဲ့ အဲဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ ဒုံးကျည်တစင်းကို မြောက်ကိုရီးယားအနောက်မြောက် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရာ နေရာတခုက ပစ်လွတ်ခဲ့တာဟာ ဟာဝိုယီကျွန်းကို ပစ်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောခဲ့တာကိုလည်း အဲဒီသတင်းစာမှာ ကိုးကားထားပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဂိတ်စ်က ဟာဝိုင်ယီမှာ ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကို အသင့်ပြင်ထားဖို့ သူ့အနေနဲ့ ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:50 PM No comments:
ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဖေသိန်း ကွယ်လွန်
နိုင်ငံကျော် ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဖေသိန်းနိုင်ငံကျော် ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဖေသိန်းသည် ရန်ကုန်ရှိ သူ၏ နေအိမ်၌ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
အသက် ၂၀ နှစ် ဝန်းကျင်မှ စတင်ကာ သတင်းစာများနှင့် မဂ္ဂဇင်းများ၌ ကာတွန်းများ တောက်လျှောက် ရေးဆွဲလာသည့် ဆရာကြီး (၈၆ နှစ်) သည် ယနေ့ နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ဆရာက လေဖြတ်တာက ၁၀ နှစ်လောက်ရှိပြီး သူ့မိသားစုက ပြုစုတာကောင်းလို့ ဒီလောက်အထိ အသက် ရှည်တာဖြစ်တယ်” ဟု ကာတွန်းဆရာ အော်ပီကျယ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဆရာကြီးကို ၁၉၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ပန်းတနော်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့ကာ၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် အထက်တန်း ပညာအဆင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်တွင် ကလေးများကဏ္ဍ၌ သရုပ်ဖော်ပုံများ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်၍ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသည့် အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း၌လည်း ကာတွန်းနှင့် ပန်းချီတာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်မူ ဆရာကြီး ကာတွန်း ဦးဘဂျမ်း၏ မြေတောင်မြှောက်ပေးမှုကြောင့် အိုးဝေတွင် သတင်းစာ ကာတွန်းများ စတင်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီး ရွှေပြည်ဦးဘတင် ပါဝင်သည့် ကမ္ဘာ့စာရိတ္တ မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ ဖိတ်ကြားသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ၂ လကြာ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပန်းချီ၊ ကာတွန်းများကို လေ့လာခွင့် ရရှိခဲ့သေးသည်။
၁၉၆၀၊ ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် အိုးဝေ၊ ဟံသာဝတီ၊ မြန်မာ့အလင်း၊ ရန်ကုန်၊ ဗမာ့ခေတ်၊ ကြေးမုံ၊ လုပ်သား သတင်းစာများတွင် သတင်းစာ ကာတွန်းများ ပင်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သလို၊ အင်္ဂလိပ်လို ထုတ်ဝေသည့် The Burman နှင့် The Nation ၌လည်း သတင်းစာ ကာတွန်းများကိုပင် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ထင်ရှားသည့် ကာတွန်းများအနက် အိုးဝေ၌ ဦးပယ်တရံ၊ ဟံသာဝတီ၌ ပြည်သူ့ကြေးမုံနဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်၊ မြန်မာ့ခေတ်၌ လောကပီတိနှင့် လောကနီတိ၊ ကြေးမုံသတင်းစာ၌ ကြေးမုံနိတိ ဟူသည့် လက်ရာများဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်တွင်လည်း ရှုမဝ၊ မြဝတီ၊ ငွေတာရီ၊ ချယ်ရီ၊ ပန်၊ မြန်မာ့ဓန၊ ပေဖူးလွှာ၊ မဟေသီ အစရှိသည့် မဂ္ဂဇင်းများ၌ သရုပ်ဖော် ကာတွန်းများ ရေးဆွဲခဲ့ရာ ဆရာကြီး၏ လက်ရာများသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ ရင်ထဲ၌ စွဲမြဲကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် ပန်းချီပန်းပု ကောင်စီ၌ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မော်ကွန်းဝင် ဒုတိယ အဆင့်လည်း ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ကွယ်လွန်ချိန်၌ ဇနီးနှင့် သားသမီး ၆ ဦး ကျန်ရစ်သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:14 AM No comments:
အီရန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသူ မီယာ ဟူစိန် မူဆာဗီ (Mir HosseinMousavi) ကို ထောက်ခံသူ ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ သေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် စုဝေးကြဖို့ မစ္စတာမူဆာဗီရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မစ္စတာမူဆာဗီနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ တီဟီရန်မြို့တော်က အီမန် ခိုမေနီ (ImamKhomeini) ရင်ပြင်မှာ ကြာသပတေးနေ့က စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုအထိမ်းအမှတ် အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံတွေအစား ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အမည်းရောင်ဝတ်စုံတွေ ၀တ်ဆင်ကြဖို့ မစ္စတာမူဆာဗီရဲ့ တောင်းဆိုမှုအတိုင်းလူထုပရိသတ် အများစုက အမည်းရောင်ဝတ်စုံတွေ ၀တ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိသမ္မတ မာမွတ်ဒ်အမာဒီနီဂျက်ဒ် (Mahmoud Ahmadinejad) ကပဲ ၆၃% မဲအရေအတွက်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေ ကြေညာလိုက်ကတည်းက အီရန်နိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။
မစ္စတာမူဆာဗီက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအသစ်တခုပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့တုန်းက တီဟီရန်မြို့တော်မှာ အစိုးရရဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေ လက်ချက်နဲ့ ဆန္ဒပြသူ ၇ဦးမက သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်ကျင်းပပေးတဲ့ သြဇာရှိတဲ့ ကြီးကြပ်ရေးကောင်စီကမစ္စတာမူဆာဗီနဲ့ တခြား ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သူ ၂ဦးကို သူတို့ပြောစရာရှိတာတွေပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီး စနေနေ့က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
တချို့မဲတွေ ပြန်ရေတွက်ပေးမယ်လို့ အဲဒီကောင်စီက ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး မဲမသမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ အမှု ၆၄၆ မှုကို စပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီလို့ ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုပါတယ်။
အီရန်ရဲ့ အဓိပတိကြီး အယာတိုလာ အလီ ခါမေနီ (Ayatollah Ali Khamenei) ကတော့စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြဖို့ တိုက်တွန်းပြီး တီဟီရန်မြို့မှာ ဒီနေ့ကျင်းပမယ့် ၀တ်ပြုပွဲကိုဦးစီးကျင်းပပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားဟာ သမ္မတ အမာဒီနီဂျက်ဒ်ကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့အားကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အီရန်ရွေးကောက်ပွဲ လက်ရှိ သမ္မတအနိုင်ရ
အီရန်နိုင်ငံက သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိသမ္မတ မာမွတ် အမာဒီနီဂျပ် ကပဲ အနိုင်ရသွားတယ်လို့ အစိုးရပိုင် သတင်း ဌာနက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့  ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးသမားကလည်း သူနိုင်တယ်လို့ ဆိုနေပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ထိပ်တန်း အရာရှိချုပ် ပြောတာကတော့ သောကြာနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထည့်ခဲ့ကြတဲ့ မဲတွေရဲ့  ၁၉ % ကို ရေတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၆၉ % က သမ္မတ မာမွတ်အမာဒီနီဂျက် အနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အကြို ရလဒ်တွေကို ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာ သိရမယ်လို့ အရင်က မျှော်လင့်ထားကြတာပါ။ သမ္မတ အမာဒီနီဂျက် နဲ့ ပြိုင်ဘက် ဖြစ်တဲ့ အရင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မီရာ ဟူစိန် မူဆာဗီကလည်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတာက သူပဲလို့ မနေ့က ညပိုင်း တီဟီရန်မြို့တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တချို့ ဒေသတွေမှာ မဲရုံတွေ နည်းပါးလို့ မဲပေးမှုတွေမှာ ပြဿနာတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါသေးတယ်။ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အီရန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးကြသူတွေလည်း အကြီးအကျယ် များကြပြီး ည ၁၀ နာရီ အထိ မဲထည့်ချိန် တိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:33 PM No comments:
Youtube မှ ဒေါင်းလုတ် ဖို့အတွက် ဖိုင်
ဒီ မှာ ဒေါင်းလုတ် လုပ် လို့ရ ပြီ
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:01 PM No comments:
Guitar Tuner ဂစ်တာကြိုးညှိ ဖို့အတွက်
ဂစ်တာကြိုးညှိ ဖို့အတွက် ဖိုင်
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:18 PM No comments:
Converter အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့အထဲက any video converter က သုံးရ လွယ်ကူသလို အခမဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေ ပါတယ်။
ပြောင်းနိုင်တဲ့ ဖော်မက်တွေ …
Mobile Phone (mp4)
Flash Video (flv, swf)
Video (mpg ntsc, mpg pal, mpeg1, mpeg2, avi, wmv)
Audio (mp3, ogg, wav, acc, wmv)ဒေါင်းလုတ်ဖို့အတွက် အောက်ကလင့်ကတဆင့် သွားလိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုတ်ဖို့အတွက် ဖိုင် ကို ကလစ်ပါ။
1.အပေါ် ဘယ်ဘက်ဒေါင့်က Add Video ကို ကလစ်ပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်တခု ထည့်သွင်းပါ။
2.အပေါ် ညာဘက်ဒေါင့်က Profile မှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ အမျိုးအစား ရွေးပါ။
3.Add Video ဘေးက Convert ကို ကလစ်ပါ။
အဆင့် ၃ ဆင့်ဘဲ ရှိပါတယ်။ ပြောင်းပြီးသွားတဲ့ဖိုင်တွေက My Document > Any Video Converter ဖိုလ်ဒါထဲမှာ ရှိနေပါမယ်။
Posted By Kyaw Cross..www.zwekabin.org
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:16 PM 1 comment:
Swatch Spring-Summer Collection 2009(Tokyo ...Ginza)
Price List with Japanese Yen
ကိုသွင်လင်းအောင်ရဲ့  ယုံကြည်ချက်
ကိုသွင်လင်းအောင် ရဲ့  ယုံကြည်ချက်ကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
"မိမိတို့ လူအသိုင်းအဝိုင်း အဖွဲ့အစည်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အတက်နိုင်ဆုံး ဖြည့်စည်းလုပ်ကိုင် သွားသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။"
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:09 AM No comments:
စာရေးဆရာမောင်ဆုရှင်ကို ယနေ့ညနေ (၂) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရေဝေးသုသာန်တွင် မီးသဂြုင်္ိဟ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဈာပနကို စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်း ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများ (၁,၀၀၀) ကျော် လာရောက်ပို့ဆောင်ကြကြောင်း ပြည်တွင်းမှ စာရေးဆရာတဦးက ပြောသည်။
ဆရာမောင်ဆုရှင်သည် ၂၀၀၉ ခု၊ ဇွန်လ (၂) ရက်၊ နံနက် (၁) နာရီကျော်တွင် SSC ရွှေဂုံတိုင်အထူးကုဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် (၇၈) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဆရာမောင်ဆုရှင်ကို မြောင်းမြမြို့တွင် အဖ ဦးချစ်ဖေ၊ အမိ ဒေါ်စိန်မြင့်တို့မှ ၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက် နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အမည်ရင်းမှာ ဦးမျိုးသန့်ဖြစ်သည်။
မောင်ဆုရှင်ကလောင်အမည်မှာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပြီး မောင်ကောင်းမြင့်၊ မောင်ကြည်ဖြူ၊ ဦးဘခန့်၊ မျိုးသန့်၊ ၀င်းသန့်၊ အောင်သူ ဟူသော ကလောင်ခွဲများဖြင့်လည်း သုတ၊ ရသစာပေများကို ရေးသားခဲ့ကြောင်း မိသားစု ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ဆရာမောင်ဆုရှင် ရေးသားခဲ့သော ဘာသာပြန် စာအုပ်များအနက် ပင်လယ်ပြာနဲ့ တံငါအို စာအုပ်ကြောင့် ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး အားနက်စ်ဟဲမင်းဝေး၏ စာပေအရေးအသားကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်နိုင်သည့်အတွက် ဆရာမောင်ဆုရှင်ကို ကျေးဇူးတင်နေကြောင်း လူငယ် စာဖတ်ဝါသနာတဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်က ပဲခူးကပါ။ ဆရာ့ကို အပြင်မှာ မမြင်ဖူးပါဘူး။ သတင်းစာမှာ ဆရာ့နာရေးပါတာတွေ့တော့ လာခဲ့တာပါ။ ကျနော်က ဆရာ့ရဲ့ဘာသာပြန်ကို ဖတ်ထားတာဆိုတော့ ဆရာဆုံးတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်
သဂြုင်္ိဟ်မယ့်နေ့မှာ လာခဲ့တာပါ” ဟု ပဲခူးမြို့မှ အဆိုပါ လူငယ်က ပြောသည်။
ဆရာသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆရာကျုပ်တက္ကသိုလ်နှင့် ဘော့စတွန် တက္ကသိုလ်တို့မှ သတင်းစာပညာ ဒီပလိုမာနှင့် စာအုပ်ထုပ်ဝေရေးပညာ ဒီပလိုမာများကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန စာပေဗိမာန်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံပေး အရာရှိအဖြစ်လည်း ပူးတွဲတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေ စာပေဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စာပေဗိမာန်စာမူဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်၊ သုတစွယ်စုံစာပေဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ စသည့်တာဝန် များနှင့် နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာပေဆိုင်ရာ တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဆရာမောင်ဆုရှင်သည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ သေဆုံးသည်ထိ စာအုပ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး စာရေးဆရာ မောင်ပေါ်ထွန်းနှင့်အတူ စာအုပ်ဟူသည် ၁၉၇၂၊ စာရေးဆရာ သိန်းတန် ဟံသာဝတီနှင့် စာနယ်ဇင်းဟူသည် ၁၉၇၄ တို့ကို ရေးသားခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။
ကော့သောင်းတွင် မြေပြို၊ အနည်းဆုံး ၄ ဦး သေ
.တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့တွင် ယမန်နေ့ညက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြေပြိုမှုကြောင့် အနည်းဆုံးလူ ၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူများလည်း အများအပြားရှိကြောင်း ကော့သောင်းမြိုခံတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါမြို့ခံက “ကလေးသုံးယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ အမေတော့ သေသွားတယ်၊ လူ ၇ ယောက်လောက် ကတော့ အခုဆေးရုံမှာ ရောက်နေတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းမြေပြိုမှုသည် ယမန်နေ့ညက ပြင်းထန်သောလေနှင့် သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသောမိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆောက်အအုံများ ပြိုကျခဲ့ပြီး တချို့သောအိမ်များမှာ ရေမြုပ်သွားကာ သစ်ပင်များမှာလည်း ကျိုးကျကုန်ကြောင်း ယင်းမြို့ ခံက ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကော့သောင်းမြို့သည် မြန်မာပြည် တောင်ဘက်အကျဆုံး နေရာတွင်တည်ရှိကာ မြန်မာပြည်၏ အဓိကကျသော ပင်လယ် ဆိပ်ကမ်းမြို့တမြို့ ဖြစ်ပြီး ယင်းမြို့မှတဆင့် မွန်နှင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် ထိုင်းနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
'There Were Bullets Flying Everywhere'
Shao Jiang wasastudent at the time of the Tiananmen Square massacre and took part in the demonstrations. He still cannot believe that the soldiers fired on their own countrymen.
'I Want Justice For My Son's Death'
Ding Zilin's student son was killed in the Tiananmen Square massacre. Twenty years on the pain of his death is as raw as ever.
Tiananmen Protests: 20 Years On
It has been 20 years since the Chinese Army rolled into Tiananmen Square to crush student-led pro-democracy protests. Sky's Peter Sharp reports on an anniversary the Chinese government would like to forget.
'The Deaths Brought Shame On My Country'
Bao Tong wasaCommunist Party official at the time of the Tiananmen Square massacre. He now bitterly regrets not being able to do more to stop the killing.
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:46 AM No comments:
'We are full of energy'
Beijing clamps down on media
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ် တီယန်နန်မင် အရေးအပေါ် နှိမ်နင်းမှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ စစ်တပ်က အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတာကြောင့် အဲဒီမှာ ဖမ်းဆီးခံရသူ၊ သတ်ဖြတ်ခံရသူ၊ ပျောက်ဆုံးသူ အရေအတွက်ကို ကြေညာပေးဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက တရုတ်နိုင်ငံကို တောင်းဆိုပါတယ်။ တီယန်နန်မင် အရေးအခင်း နှစ် ၂၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကြေညာချက် တရပ် ထုတ်ပါတယ်။ တရုတ်အနေနဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်သလိုပဲ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စကိုလည်း အလေးပေး လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ကလင်တန်က တိုက်တွန်းပါတယ်။
ရာပေါင်းများစွာသော အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက် စွန့်ခဲ့ရတယ်လို့ မစ္စက် ကလင်တန်က အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည် အောက်မေ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြတာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေကို ချိန်းခြောက် အနှောက်အယှက်ပေးတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့၊ အဲဒါနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံရသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ အဲဒီ အဖြစ်အပျက်မှာ သေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံတာတွေ စတင် လုပ်ဖို့ ကလင်တန်က တရုတ်အစိုးရကို တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျောင်းသားနဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ရက်သတင်းပတ်ကြာ ဆန္ဒပြမှုကို နှိမ်နင်းဖို့ တရုတ်အစိုးရဟာ ဆန္ဒပြရာ တီယန်နန်မင် ရင်ပြင်ကို တင့်ကားတွေ၊ စစ်သားတွေ ၁၉၈၉ခု ဂျွန်လ ၄ရက်နေ့မှာ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရာပေါင်းများစွာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရတာပါ။ အခု နှစ် ၂၀ပြည့် အထိန်းအမှတ်နေ့မှာတော့ လုံခြုံရေးကို အထူး တင်းကျပ်ထားပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:28 AM No comments:
'Spiderman' Scales Sydney Skyscraper
French climber Alain Robert has been arrested in Sydney, Australia, after scalinga41-storey building with his bare hands. Some 200 onlookers cheered 'the Spiderman'. Authorities however, were not impressed.
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:12 AM No comments:
အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ လေယာဉ်အပိုင်းအစများဟာ ဘရာဇီး
အနောက်မြောက်ကမ်းလွန်မှာ တနင်္လာနေ့က ပျောက်သွားတဲ့ Air France ခရီးသည်
လေယာဉ်က အပျက်တွေလားဆိုတာ ဘရာဇီးလေယာဉ်တွေက ကွက်ပြီးတော့ စူးစမ်း
ကမ်းလွန် ကီလိုမီတာ ၆၅၀ အကွာမှာ လေယာဉ်ထိုင်ခုံတွေ၊ ဓာတ်ဆီစတွေနဲ့ သတ္တုပိုင်း
အပိုင်းအစများကို ဘရာဇီးလေတပ်က အင်္ဂါနေ့မှာ တွေ့ရှိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ
အပိုင်းအစတွေကို ရယူပြီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများက ပျောက်နေတဲ့လေယာဉ်က
အပိုင်းများဟုတ်မဟုတ် ပိုင်းဖြတ်နိုင်မှာလို့ တာဝန်ခံများက ပြောကြားကြပါတယ်။
ဘရာဇီးစစ်သင်္ဘောတွေကတော့ အဲဒီဒေသကို အင်္ဂါနေ့ည သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ
လူ ၂၂၈ ယောက်တင်ဆောင်ပြီး တနင်္လာနေ့က ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့ကနေ
ပဲရစ်မြို့ကို ပျံသန်းသွားတဲ့ A-330 Air Bus လေယာဉ်ကြီးတက်သွားပြီး ၄ နာရီလောက်
ဘရာဇီး၊ ပြင်သစ်နဲ့ စပိန်နိုင်ငံတို့က အထူးကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လေယာဉ်
တွေက အဲဒီ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီးရဲ့ ပျံသန်းမှု Recorder နဲ့ တခြားပစ္စည်းများကို
Air France: Missing plane probably crashed into Atlantic(5)
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းလွင်
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းလွင် ရာထူးမှ အနားယူ မည်ဟု ဌာနတွင်း သတင်းရပ်ကွက် အပြောအရ သိရသည်။
အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် မှာ သူ၏ တာဝန်လုပ်ငန်းများ လွှဲပြောင်းပေးနေ ပြီဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ဆရာက ဒီမှာ မလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ နားသွားပါပြီ၊ ကျန်းမာရေး ကြောင့်ပါ ”ဟု မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောကြားသည်။
ဒေါက်တာထွန်းလွင်မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ခန့်မှသည် ညွှန်ကြားရေးမှူး တာဝန်ယူထားသည့်တိုင် မိုးလေဝသ သတင်းကြေညာသူ အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း မတိုင်မီ အချိန်ထိ မိုးလေဝသ သတင်းအတွက် အားထားရသူတဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး သတင်းလောကတွင်လည်း သတင်း ထုတ်ပြန်ရန် ပွင့်လင်းသူ အဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ နာဂစ် မုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာများတွင် မိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းလွင်မှာ လူထု စိတ်ဝင်စားမှု ခံရသော ပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် ဦးထွန်းလွင်ကို ထူးခြားစွာပင် ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးအပ်လိုက်ရာ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အငြိမ်းစား ဥပဒေအရ အသက် ၆၅နှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်း ယခု အသက် ၆၁ နှစ် အရွယ်တွင် ရုတ်တရက် အငြိမ်းစား ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ငါန်းဇွန်းမြို့နယ် ကုလားကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
ရူပဗေဒဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဖလောရီဒါ တက္ကသိုလ်မှ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဘာသာရပ်ကို သင်ယူခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စက်မှုထူးချွန် ဒုတိယဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရက ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ တွင် နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ အသင်းကြီး၏ အမြဲတန်း အသင်းဝင်၊ ၂၀၀၇ တွင် အာရှဒေသ သဘာဝဘေးဒဏ် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြင်ဆင်ရေး ကောင်စီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
(စိန်ဝင်း ဖြည့်စွက် ရေးသားထားသည်။)
မြစ်မင်းတွေကို ချစ်ခြင်းဖွဲ့လေသူ မှော်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ရာဇ၀င် ...
မြစ်တစ်စင်းသည်ကား သဘာဝတရား၏အလိုအတိုင်း တိုးတက်လာနေသည့် ဒီရေတို့ကို မငြင်းမဆန်လက်ခံနေလေသည်။ မြစ်ရေတို့ တဖြည်းဖြည်းတက်လာလေပြီ။ “သံလွင်မြစ်” ကမ်းဘေးက သန်းခေါင်ယံသို့ချဉ်းကပ်နေတဲ့ည။
သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေးတွင်မူ စွန့်ပစ်ခံရရှာသော သင်္ဘောပျက်ကြီးတစ်စင်းကား မတည်မြဲခြင်း၏ သင်္ကေတအလား အသက်မဲ့လျက်ရှိလေသည်။ အဆိုပါ သင်္ဘောပျက်ကြီးနှင့် သံလွင်မြစ်ကမ်းသို့ဆက်သွယ်ထားသည့် “ကုန်းဘောင်” ပြားဟုပညတ်ပြုအပ်သော သစ်သား တံတား ပျဉ်ချပ်လေးပေါ်တွင်မူ မျှော်လင့်ရင်ခုန်ခြင်းများ၏ ပြတ်စဲရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ဘ၀နှင့်ဆန္ဒ ဆက်စပ်၍မရနိုင်ရှာတော့သည့် လူငယ်တစ်ဦး။
“ကံကြမ္မာ၏စီရင်ခြင်း” ကိုခံယူရန်အသင့်ဖြစ်နေသည့် စိတ်ကျနေသော လူငယ်လေး သည်ကား သေရည်အိုးထဲစိတ်အဆာပြေလိုငြား ကူးခတ်ခဲ့ပြီး လက်ပန်းကျနေခဲ့လေသည်။ သို့သော် သူ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာတော့ မိခင်ကိုချစ်ခင်ခြင်းများက မမောတမ်းမပမ်းတမ်း ကုန်း ဘောင်ပျဉ်ချပ်လေးမှသည် စကြ၀ဠာအထိ ပျံ့လွင့်နေခဲ့လေသည်။
သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေးတွင်တော့ လူငယ်လေး၏ မိတ်ဆွေတစ်စုသည်ကား သူတို့ မိတ်ဆွေ၏ “ကံကြမ္မာစီခန်း” ကို အသိရှိရှိဖြင့် မလှုပ်မယှက် ကြည့်နေခဲ့ရရှာ၏။ “ကြည့်ချင်ပွဲ”မဟုတ်ဘဲ ကြည့်နေရုံမှတစ်ပါး သူတို့ဘာမှဝင်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိချေ။
“မင်းတို့ငါ့အမေကိုလုံးဝမပြောရဘူး” ဟူသည့် လူငယ်၏အမိန့်အား သူတို့ မလွန် ဆန်နိုင်ကြသည်ပဲ။
“ဘယ်သူမှမလာကြနဲ့၊ ခင်ဗျားတို့လာရင်ကျုပ်ခုန်ချလိုက်မယ်” ဆိုသည့် တိကျပြတ် သားသည့် သူ၏သေရည်များနှင့် လိမ်းကျံထားသော အဆုံးစွန်ှဆန္ဒကို သူတို့ လိုက်လျောရ တော့မည်လား။ သင်္ဘောပျက်ဆက်တင်ဘေးတွင် လူငယ်တစ်စုထိုးဇာတ်တစ်ခု ကပြနေ ကြခြင်းတော့မဟုတ်ချေ။ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်။ ကံကြမ္မာ၏ဇာတ်ညွှန်းသည်ရုတ်ချည်းပြောင်း လဲခဲ့လေသည်။
“အန်တီ…မသွားပါနဲ့၊ ရေတက်လာပြီး၊ အန်တီကျသွားလိမ့်မယ်”
ပါးလှပ်သောခန္ဒာကိုယ်နှင့်သားဇောကပ်နေသည့်မိခင်တစ်ဦးမှာမူ ဘာကိုမှသတိမမူ တော့။ သင်္ဘောပျက်ကြီးဆီသို့ ကုန်းဘောင်ပျဉ်ချပ်ပြားလေးမှတစ်ဆင့် တွားသွားနေချေပြီ။
သူမအနေဖြင့်မတ်တပ်မရပ်ဝံ့လောက်အောင်ပင်သားဇောကားဖိစီးလေးလံနေသည်ပဲ။ သား သည် သူ့အတွက် စကြ၀ဠာ။
“ငါ့အမေကို မင်းတို့သွားမပြောနဲ့ဆိုတာ မင်းတို့သွားပြောတယ်ပေါ့လေ”
သူ့သားသည် ကတိတည်သူ၊ စိတ်အင်အားကောင်းပြီး သူမလုပ်နိုင်တာကို ဘယ် တော့မှမပြောတတ်သည်ကိုအမေသိသည်။
ကမ်းပေါ်မှပြန်စောင့်ရန် မိခင်အိုတွင် ခွန်အားမဲ့ သွားခဲ့ရှာပြီ။ ဤတွင် သားကအမေကို လက်တွဲလျက် ခက်ခဲစွာ ပြန်ခေါ်လာရတော့သည်။
ဤသို့ဖြင့် သူ့မိခင်အားသွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည့်မိတ်ဆွေများအဖို့လည်း သူ၏ ပြစ်တင်ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းသံများမှဝေးရာသို့ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာပြန်လာနိုင်ခဲ့လေတော့သည်။
သံလွင်သည် “ကံကြမ္မာ၏စီးနင်းခြင်း” ဟူသည့် ထိုးဇာတ်ကို ပြီးဆုံးအောင်မကပြနိုင်ခဲ့ ပါချေ။
ပါးလှပ်သွယ်လျသော မိခင်အိုသည် သူ၏သွေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာရရှာသူ သူချစ်သောသားကြီးအား စိတ်ခွန်အား၊ ရုပ်ခွန်အားများ သူမတတ်နိုင်သည်ထက်ပို၍ဖြည့် စည်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပြုခဲ့ရှာလေသည်။
“သန်းခေါင်ထက်ပို၍ညဉ့်မနက်တော့ပြီ”ဟ “အဆုံးစွန်သော စွန့်လွှတ်ခြင်း” ကျဆုံးခြင်း များကိုနောက်ချန်ရစ်ကာ မနက်ခင်း အရုဏ်ဦးတွင် မျှော်လင့်ဖူးပွင့်လာတော့မည့် သီချင်း ပန်းပွင့်များအတွက် လူငယ်သည်မြစ်၏တေးသွားနှင့်တေးကဗျာတို့အား အချိုးညီပေါင်းစပ် ခဲ့လေသည်။
“မြစ်တစ်ခုလို အချိန်များစီးဆင်းဆဲ…လူ့ဘ၀ကို တို့ရရှိခဲ့တယ်”
အဆိုပါ သားအမိ၏ “သံလွင်ဖြစ်စဉ်” သည်ကား တကယ့်မှန်ကန်သော ချစ်ခြင်း မေတ္တာဘွဲ့မဟာဖြစ်ကြောင်း မိခင်အိုဒေါ်မြရင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူငယ်လေးမှာ ကိုကျော်မြင့်လွင်(ခေါ်) ကဗျာရေးသူ သျှပ်မှူးကျော်၊ ချစ်ကိုယ်တွေ့ ဖွဲ့ခဲ့သည့် “လင်းထက်”ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် လူဦးရေအထူထပ်ဆုံး၊ လူနေမှုအသိပ်သည်းဆုံး တိုင်းဒေသ ကြီးဖြစ်ရုံမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးကျီကြီးဖြစ်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း၏မြို့တော် “ပုသိမ်”ကား သေးသလောက်ခမ်းနားကြီးကျယ်သည့် သမိုင်းစဉ်ထုထည်ထူထူဖြင့် အေးဆေးပျင်းရိနေ လေသည်။ “င၀န်”မြစ်ကြီးသည်မြို့ကိုနှစ်ခြမ်းခွဲကာရထားတို့ကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်သည်။
မော် တော်ကားတို့ကို ပင်လယ်အထိခေါ်သွားသည်။ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတို့အတွက် လှိုင်း လေငြိမ်ရာ ကျွန်းရိပ်သာလမ်းဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်သောပုသိမ်သည် လူပျင်းများစွာ (အထူးသဖြင့်) အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ ဉာဏ်ကြီးရှင်တို့ကို ဂုဏ်သရေရှိစွာ မွေးထုတ်ပေးခဲ့လေ သည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် မွန်တို့ဌာန ရာမညမှ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်သို့ ကျန်းမာရေးပညာ အရာရှိ ဦးထွန်းမြင့်အမည်ရှိ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတစ်ဦး ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်။ သံလွင်မြစ်ဝှမ်း သားတစ်ဦးအား“င၀န်”သည် လက်ခံလိုက်လေသည်။
နောက် ခုနစ်နှစ်အကြာ ၁၉၆၁-၆၂ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်မြရင်အမည်ရှိသံလွင်သူ၊ သူနာပြုဆရာမလေးတစ်ယောက်သည်လည်း ပုသိမ် သို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။
ကျန်းမာရေးဋ္ဌာန ၀န်ထမ်းနှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးထွန်းမြင့်နှင့် ဒေါ်မြရင်တို့သည် ၁၉၆၂ တွင် နိုင်ငံ့တာဝန်သာမက နှလုံးသားတာဝန်ကိုပါ နှစ်ဦးသဘောတူ ပုသိမ်တွင်ထူထောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြလေသည်။
သမိုင်းခေတ်တစ်ခု၏စပ်ကူးမတ်ကူးကာလဖြစ်သောထိုအချိန်က ပုသိမ်တွင်ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆေးတိုက်ကြီး ၂ ခုရှိခဲ့သည်။ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးမှအထက်တန်းသူနာပြုဆရာမကြီး Sister ဒေါ်သန်းစိန်နှင့် ခင်ပွန်းသည်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖာတားတို့၏ဆေးတိုက်ကြီးနှင့် ဆရာ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာအယ်လ်ဖောင်၊ ဒေါ်နွေးတို့၏ဆေးတိုက်ကြီးတို့ပင် ဖြစ်သည်။
ဦးထွန်းမြင့်၊ ဒေါ်မြရင်တို့၏ ရင်နှစ်သည်းခြာ သားရတနာဖြစ်လာသည့် သားကြီး ကိုသန်းထွန်းစိုးအား ပုသိမ်မြို့၊ ဘန့်ဘွေးကုန်းရပ်ရှိဒေါက်တာဖာတား၏ဆေးတိုက်ကြီးတွင် ၁-၇-၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့၏။
ကိုသန်းထွန်းစိုး (ခေါ်) ကိုကျော်မြင့်လွင်အား “င၀န်” သည် လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး
သူကတော့ ကမ္ဘာကျော် ဒသနပညာရှင် “ဟိုက်ရာကလီတပ်စ်”၏ “သူသူငါငါ မြစ်တစ်စင်းထဲတွင် ရေနှစ်ခါမချိုးနိုင်” ဟူသော ဒသနကို “င၀န်”ထံမှ ရရှိကာ “ကမ္ဘာမြေပြင်အတွက် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်” ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။
ငယ်နာမည် ကိုဘဲဥဟုအမည်တွင်သောသူ့သားကြီးမောင်မောင်ဘဲဥ လသားတွင် ၀န်ထမ်း တို့၏ သဘောသဘာဝအရသူ့မွေးရပ်မြေ“မော်လမြိုင်”သို့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့သည်ဟု ဒေါ်မြရင် က ပြောပြသည်။
“သားသား ၂ နှစ်သားမပြည့်ခင်မှာပဲ တို့ပုသိမ်ကိုပြန်ရောက်ရပြန်တယ်၊
တို့က Posting ပြန်ရပေမယ့် သူ့အဖေကပုသိမ်ကနေပြောင်းလို့မရဘူးလေ၊ ဒါနဲ့ပဲတို့တွေ ပုသိမ်မှာ မြဲသွားခဲ့ရတော့တာပဲ။ ကျန်တဲ့ကလေးတွေလည်းပုသိမ်မှာပဲမွေးခဲ့ရတော့တာပေါ့” ဟု အရီး ဒေါ်မြရင်က ပြောပြသည်။
သားကြီးသြရသ သားကြီးမောင်မောင်ဘဲ(ဘဲဥ)အား ဒေါက်တာ ဖာတား၏ ဆေးတိုက်ကြီးတွင် မွေးဖွားခဲ့သော ဦးထွန်းမြင့်၊ ဒေါ်မြရင်တို့ ဇနီးမောင်နှံသည် ကျန်သည့်သူတို့သားသမီးများအား သူတို့မိသားစုအခြေပြုရာ ပုသိမ်မြို့ပြည်တော်သာတိုက် တန်းတွင် မွေးဖွားခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
သူတို့၏ သမီးကြီး မိမိုး၊ သားဉာဏ်ဉာဏ်၊ သမီး မိတောက်တို့ကို ၀မ်းဆွဲဆရာမကြီးဒေါ်အုန်းမြကမွေးဖွားပေးခဲ့ပြီး နို့ညှာသားအောင်အောင် ကိုတော့ ဆရာမကြီးနန့်တင်မေအေးကမွေးဖွားပေးခဲ့သည်ဟု အရီးကပြောပြသည်။ သူတို့ မိသားစုအတွက် အထွေးဆုံးသား မောင်ဆုကိုတော့ ပုသိမ်တိုင်းဆေးရုံကြီးတွင် သားဖွား မီးယပ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဦးမောင်မောင်ကိုယ်တိုင် မွေးဖွားပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုကျော်မြင့်လွင်မှ အစပြု၍ သူတို့ တစ်အူထုံဆင်းမောင်နှမအားလုံး ပုသိမ်သား စစ်စစ်၊ ပုသိမ်ဇာတိများဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်။
၀န်ထမ်းသားသမီးများအတွက်များသောအားဖြင့် ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုအစသည် နေ့က လေးထိန်းကျောင်း (၀ါ) မူကြိုကျောင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ကြရသည်သာများပေသည်။ မိဘနှစ်ပါးက ၀န်ထမ်းများဖြစ်ရကား သူတို့ကိုထိန်းကျောင်းဖို့ မည်သူက တာဝန်ယူပါမည်နည်း။ အထူးသ ဖြင့် တစ်ရပ်တစ်ရွာက လာရောက်အခြေချနေထိုင်သူများအဖို့ ကြီးစွာသော အခက်အခဲ ဖြစ်ရလေသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် အတိုင်မီကာလက ပုသိမ်တွင် နေ့ကလေးထိန်းဌာနတစ်ခုသာ ရှိခဲ့သည်။ ယင်း ဌာနက “လစာနည်း” ၀န်ထမ်းများ၏ သားသမီးများကိုသာလက်ခံခဲ့သည်။ ဤတွင် မောင်ကျော်မြင့်လွင် (ခေါ်) မောင်ဘဲဥအတွက် ခက်ရချေပြီ။ ဤသို့သော အခက် အခဲကို သူ့ဖင်ဦးထွန်းမြင့်ဦးဆောင်ပြီးဖြေရှင်းခဲ့သည်ဟု ဦးထွန်းမြင့်က ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ သည်။
“တို့ ပုသိမ်မှာ…အခု “ထောင်ကုန်းရပ်ကွက်”မှာ ရှိနေတဲ့ “ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူကြို ကျောင်း” အိမ်မည်းကြီးဟာ ငါတို့စထောင်ခဲ့တာပေါ့ကွာ။ ငါရယ်၊ ပုသိမ်တိုင်းဆေးရုံကြီးက ရောဂါဗေဒ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဦးခင်မောင်၊ သူ့ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ညွန့်၊ ဘဏ်မန်နေဂျာ ဦးသိန်းထိုက်ရယ်၊ နာမည်မမှတ်မိတော့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမန်နေဂျာတစ်ယောက်ရယ်စုပေါင်းပြီး အဲဒီ ဦးကျော်တင့် (တိုင်းကျန်းမာအငြိမ်းစား) တို့အိမ်နားက အိမ်မည်းကြီးကို သွားငှားခဲ့ ကြတာပဲကွာ…”
“တို့ကပဲ ကော်မတီလုပ်ပြီးစထောင်ခဲ့တာ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ “ပဒင်းတန်း”က မူ ကြိုကျောင်းက လစာမြင့်တဲ့ ၀န်ထမ်း သားသမီးတွေကို လက်မခံဘူး၊ နောက်ပြီး သား၂ ယောက်ဆိုရင်လက်မခံဘူးကွာ၊ တို့ထောင်တဲ့ကိုယ်ထူကိုယ်ထမူကြိုကျောင်းအတွက်ဆရာမ လိုက်ငှားတော့ ဆရာမကြီးတစ်ယောက်ရတယ်ကွ၊ ဆံထုံးကြီးအကြီးကြီးနဲ့ကွာ… ဆရာမ ဟောင်းကြီးပါ၊ ဒေါ်သန်းအောင်တဲ့ကွ”
ဤသို့ဖြင့်“ထောင်ကုန်းမူကြို” တွင် မောင်သန်းထွန်းစိုး နေခဲ့ရတော့သည်။
မိဘနှစ် ပါးက ပုသိမ်ရှိ ဒေသန္တရဆေးခန်းကြီး၂ခုဖြစ်သည့် “ကုသိန္နာရုံ”ဆေးခန်းနှင့် “တလိုင်း ချောင်း”ဆေးခန်းကြီး များတွင် နေ့စဉ်အလုပ်ဆင်းခဲ့ရပြီး သူတို့သားကြီးကို မနက်ပို့ညနေကြို လုပ်ခဲ့ရပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အရီးဒေါ်ရင်မြကမူ သူ့သားကြီး၏ ဘ၀အစကို တမ်းတစွာ ပြောပြနေပါသည်။
“အဲဒီ ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းအောင်ကစလို့ ထောင်ကုန်းမူကြိုကျောင်းက ဆရာမတွေ အားလုံး သူ့ကို “မောင်သန်းထွန်းစိုး” လို့ပဲ ဒီနေ့ထိ သိကြတော့တာ။ “ကျော်မြင့်လွင်” ဆိုပြီး သူတို့မသိဘူး။ တို့ဘကြီး မွန်လူမျိုး ဘုန်းတော်ကြီးက ဇာတာခွင်နဲ့တွက်ချက်မှည့်ပေးတာ မောင်သန်းထွန်းစို… တဲ့၊ အဲဒါ သူ့အဖွား(အဖေ၏အမေ)က “အမလေးတော်…ငါ့မြေးကို သခင် သန်းထွန်းနဲ့ သခင်စိုး၊ ဒီလူကြမ်းကြီးတွေနာမည်တော့ မပေးလိုက်ပါနဲ့ကွယ်” ဆိုပြီး လူကြီးပီပီ ကန့်ကွက်ခဲ့ရာမှ“မောင်ကျော်မြင့်လွင်” ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ပြောပြသည်။
အဆိုပါဘုန်းတော် ကြီးကပဲမွန်နာမည် “ပေါ်စွမ်း” ဟုပေးခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောပြသည်။ “ဒီကောင်ဟာ လက်ဖျားငွေသီးမယ် ကလေးပဲ၊ ဒါကြောင့် “ပေါ်စွမ်း”လို့ခေါ်ရမယ်ဟု ဆိုခဲ့သည်တဲ့။ “ပေါ်စွမ်း”သည် မွန်ဘာသာဖြင့် “ကိုငွေသီး” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဟု အရီးက ပြောပြသည်။
သူကတော့ “ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိဘဲ သိက္ခာရှိချင်သေးသတဲ့” ဟူ၍ “အမေ့ရဲ့ ဒုက္ခအိုးလေး” ကို ဖွဲ့သီသွားခဲ့လေသည်။
ငယ်နာမည် ဘဲဥ၊ ပေါ်စွမ်း၊ သန်းထွန်းစိုး၊ ကျော်မြင့်လွင်ဆိုသည့် ပုသိမ်သား မွန်-မြန်မာ ကပြားလေးသည် ဆံထုံးတော်ကြီး ဒေါ်သန်းအောင်၏လက်တွင် ကျောင်းသားဘ၀ကို စတင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူ ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။
ဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဘယ်အရာက အရေးကြီးသနည်းဟူသည့် မေးခွန်း၏အဖြေကို မည်သူကမျှ ယနေ့ထက်တိုင် အဖြေထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေူးချေ။ အငြင်းပွားနေကြဆဲ။ သို့သော် ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း လိုအပ်သည်ကတော့ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ ပုစ္ဆာ မဟုတ်ပါချေ။
ကိုကျော်မြင့်လွင်ကြီးပြင်းခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင်သည် နိုင်ငံတော်ကအရာရှိများကို တာဝန် ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် နေထိုင်ရန်ပေးထားသည့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်တန်းများဖြစ်သည်။ “ပြည်တော်သာ” တိုက်တန်းများ၊ လုံးချင်းတိုက်များသည်ကား တိုင်းအဆင့်အရာရှိဝန်ထမ်း များအတွက်သာ ဖြစ်ချေသည်။
ပုသိမ်မြို့လည် ရုပ်ရှင်ရုံကြီးနှင့် ၂ရုံနှင့် မကွာဝေးလှချေ။
ဤသို့သော ပတ်ဝန်းကျင်သည် သူ့အတွက် အနုပညာအမြုတေကို ကြီးရင့်ရှင်သန်စေရန် ရေခံမြေခံကောင်းခဲ့စေသည်ဟု ယူဆရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတစ်ဝ မိဘနှစ်ပါး၏ စရိုက်လက္ခဏာနှင့် ၀ါသနာအထုံတို့ကလည်း နုနယ်သည့်နှလုံးသား နှင့် ဦးနှောက်အတွက် စံပြုစရာဖြစ်ခဲ့သည်ကို အနည်းနှင့်အများတော့ လက်ခံရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မောင်ကျော်မြင့်လွင် ရေဒီယိုဖက်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတတ်သည်က သူ့ဖခင်၏ ရေဒီယိုလေးသာတည်း။
သူ့ဖခင်ဦးထွန်းမြင့်သည် “မဟာဂီတ”အနုအလှတေးတို့တွင် ၀ါသနာထုံလှလေသည်။ ထိုကာလများဆီက ၀န်ထမ်းများအဖို့ စနေနေ့ဝက်၊ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက် များကား အပြည့်အ၀လှပခဲ့သော မိသားစုပိုင် အားလပ်ရက်စစ်စစ်များ ဖြစ်ခဲ့ချေသည်။ ဤဖခင်၏ အစီအမံဖြင့် သူတို့တိုက်ခန်းလေးတွင် ရံဖန်ရံခါဆိုသလို မဟာဂီတသံများဖြင့် ထုံမွှမ်းခဲ့ရလေသည်။ သူသည် “ထောင်ရောင်နေပတ်ပျိုး” နှင့် ယဉ်ပါးခဲ့ရသူ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
“စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေဆိုရင် အလှည့်ကျလူကြီးတွေကို ပင့်ဖိတ်ပြီး ဆိုကြတီးကြ တာပေါ့လေ၊ တစ်ခုခုကျွေးပြီးတော့ပေါ့ကွာ၊ “ဦးအိမ်တက်”တို့ “ဆရာမောင်”တို့ “ဦးဘသောင်း”တို့ မင်းတို့ ယိုးဒယားကုန်းရပ်ကွက်က “ဦးလှထွန်း”တို့နဲ့ပေါ့။ ဦးလှထွန်း ဆိုတဲ့ အဖိုးကြီးဆိုရင် သီချင်းကြီးဆိုတာ သိပ်ကောင်းတာပေါ့၊ အသံဝါကြီးနဲ့ကွာ၊ တို့က ကာလပေါ်တွေမဟုတ်ဘူး၊ သီချင်းကြီးဝိုင်းပါ။ ပတ္တလား၊ တယောနဲ့ ဘင်ဂျိုတွေလဲ ပါတာပေါ့၊
အဲဒီတုန်းက ပုသိမ်မှာ ဘင်ဂျိုကောင်းတာ ၂ ယောက် ၃ ယောက်လောက်ပဲရှိတာ၊
ဒီအထဲမှာ ‘ဗန္ဓုလထီးဆိုင်’က‘ဦးငွေလွယ်’ ဆိုတဲ့ တရုတ်ကြီးဟာ အကောင်းဆုံးပဲကွ၊ သူက သီချင်းကြီးတွေ အများကြီးရတယ် “ဦးထွန်းမြင့်က သူ့သားကြီးမောင်သန်းထွန်းစိုး ယဉ်ပါးကြီးပြင်းခဲ့ရသည့် သူတို့၏ ဂီတ၀ိုင်းအကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
နေ့ခင်းဘက်တွင် မူကြိုကျောင်းတက်ရပြီး၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခံများဖြင့် ယဉ်ပါးကြီးပြင်းခဲ့ရသူ မောင်သန်းထွန်းစိုးတစ်ဖြစ်လဲ မောင်ကျော်မြင့်လွင် တစ်ယောက် ဂီတအနုပညာကို ခုံမင်တက်မက်ဖို့ လုံလောက်သော ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းခံ များပင်ဖြစ်တော့သည်။ သူ့ဖခင်က သူ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်သားလောက်တွင် ဘာဂျာ(ဟာမိုနီတာ) လေးတစ်လက် စတင်ဝယ်ပေးခဲ့သည်တွင် သူက စူးစမ်းသောကလေးတို့ သဘာဝအတိုင်း တစ်စစီဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်ဟု ပြောသည်။ ဆန်းကြယ်သည့် အသံထွက် တူရိယာ ပစည်းလေးကို ကလေးတစ်ယောက်အတွက် စူးစမ်းစရာကောင်းနေသည်ထင့်။ သူ မတီးတတ် မမှုတ်တတ်သည့် လူကြီးများတီးခတ်နေကြသည့် ဘင်ဂျို၊ တယော၊ မြန်မာဂီတ၊ ပတ္တလား တို့ထက် သူပိုင်ဆိုင်သည့် ‘ဘာဂျာ’ လေးကို သူစိတ်ဝင်တစား စူးစမ်းလိုချင်သည်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
မြို့လယ် ရုပ်ရှင်ရုံကြီး ၂ ရုံနှင့် မကွာဝေးလှသော သူတို့နေထိုင်ရာ ‘ပြည်တော်သာ’ တိုက်တန်းမှ အနည်းငယ်ဆက်သွားလျင် ပုသိမ်၏ မြို့အသည်းနှလုံး၊ မြို့လည်ခေါင်ရှိ မိဖုရား ကြီးဥမ္မာဒန္တီ၏ ကောင်းမှုတော် ‘ရွှေမုဋ္ဌော’ စေတီတော်ကြီးကို ရောက်သည်။
ယခင်ကာလ များက ပုသိမ်သည်သင်္ဘောဖြင့်သာ မဟာရန်ကုန်အပါအ၀င် အခြားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မြို့ကြီး များသို့ သွားလာနိုင်ခဲ့လေသည်။
င၀န်မြစ်သည် ကွေ့ကောက်စီးဆင်းလျက် ပုသိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပုသိမ်ကိုဝင်လျင် ‘ရွှေမုဋ္ဌော’ စေတီအား ၃ ကြိမ် ဦးခိုက်ရသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။
ပုသိမ်ကမ်းနား ‘ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း’ တံတားမှတက်တက်ချင်း ဘုရားကြီး အား ဖူးမျှော်ရပေမည်။
ရွှေမုဋ္ဌောဘုရားကြီး၏ တောင်ဘက် စောင်းတန်းကြီးကား ပုသိမ်မြစ်အထိ ရောက်သည်။
ဈေးလည်းရှိကာ ‘နတ်လမ်းဈေး’ ဟုခေါ်တွင်သည်။ ယခုတော့ စောင်းတန်းကြီးသာရှိတော့ပြီး ဈေးကားမရှိတော့ပြီ၊ ဘုရားကြီးတွင်နှစ်စဉ် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ၊ တပို့တွဲလစတုမတူထိုးပွဲ၊ မသိုးသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ စသည်ဖြင့်ရှိသည်။
တစ်ခုသော ‘ရွှေမုဋ္ဌောစေတီကြီး’ ၏ ထီးတော်တင်လှူပွဲကြီးတွင် ဆိုင်းဝိုင်းကြီးဖြင့် ခမ်းခမ်းနားနား ပူဇော်တင်လှူခဲ့ရာ မူကြိုကျောင်းသား မောင်သန်းထွန်းစိုး (၀ါ) မောင်ကျော်မြင့်လွင်မှာ မခံနိုင်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီး ပုဆိုးလေး ခါးတောင်းကြိုက်ကာ ကွေးနေအောင် က, လေသည်တဲ့၊ သူကသောအခါ သူ့ညီအကြီးဆုံး ကိုဉာဏ်စိုး(ယခု) လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ (FISCA Co)မှာလည်း အစ်ကိုကြီးနှင့်အတူ ကွေးနေအောင်ကခဲ့ကြသည်ဟု သူတို့မိခင်ကြီးက ပြောသည်။
ရေဒီယိုဖက်အိပ်ပြီး ‘၀င်းဦး’ ကို အသည်းစွဲကြိုက်ခဲ့သူ၊ မောင်ကျော်မြင့်လွင်၏ ပထမဆုံးသော Performance ဟုပင် မှတ်တမ်းပြုရပေမည်။ ဒီလိုနှင့် ‘ပေါ်စွမ်း’ ခေါ် မောင်ကျော်မြင့်လွင်တစ်ယောက် မူလတန်းကျောင်း တက်ခဲ့ရလေသည်။
သူတို့အိမ်နှင့် အဝေးလှသော အမှတ်(၂၀) အမက၊ ဥမ္မာဒန္တီ ရပ်တွင် ဖြစ်သည်။
တရုတ်ကျောင်းဟု အမည်တွင်သော အမှတ်(၂၀) အမကသည် မြို့ရှိကြေးရတက်၊ လူကုံထံသားသမီးများ၊ စာတော်သူများဖြင့် နာမည်ကျော်သည့် ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
မောင်ကျော်မြင့်လွင် တတိယတန်းအရောက်တွင် သူ့ဆရာမ ဒေါ်ခင်ခင်က ‘မောင်ကျော်မြင့်လွင်… မင်းကဗျာရွတ်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရမယ်။ မင်းကို ဆရာမယုံကြည်လို့ခိုင်းတာ’ ဟူ၍ တာဝန်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဤတွင် ဖခင်ဖြစ်သူက ‘တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ’ ထဲမှ ထုတ်နှုတ်လျက် နဘေကာရန်ဖြင့် ပြန်လည်ရေးသားလေ့ကျင့်ပေးပြီး ကဗျာရွတ် ခဲ့ရသည်တဲ့။
သူ၏ အသွေးအသားထဲတွင် ‘ကဗျာ’ စီးဆင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း အမွန်အစလည်း ဖြစ်ပေတော့သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဒေသကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀ သူတို့ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ သော ‘မြ’ အမည်ရှိ ကျောင်းတွင်းကဗျာစာအုပ်လေးတွင် သူက
ဟုရေးခဲ့ပြီး သံသရာထိပါအောင် ကဗျာကိုချစ်သွားခဲ့တော့သည်။
ကဗျာဆရာသျှပ်မှူးကျော် ဖြစ်ရန် မောင်ကျော်မြင့်လွင်သည် တတိယတန်း ကျောင်းသားဘ၀က စတင်ခဲ့သည်ပဲ။ တစ်ထောင့်တစ်ညမှသည် သံသရာထိအောင် ရှည်လျားခဲ့ချေ၏။
ဤသို့ဖြင့် တိတ်တိတ်လေးပျင်းနေတတ်တဲ့ ‘င၀န်’ မြစ်ကမ်းဘေးက ပုသိမ်မြို့လေးဟာ ‘ကမ္ဘာမြေရဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်’ ကို ရရှိခဲ့လေသည်။
သူသည်ကား ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူကြိုကျောင်းသားလေး ‘မောင်သန်းထွန်းစိုး’၊
ပုသိမ်မြို့က ဥမ္မာဒန္တီ မိဖုရားကြီး တည်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ ‘ရွှေမုဋ္ဌော’ စေတီတော်ကြီး၊ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲမှာ ပုဆိုးလေး ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး ညီငယ်နဲ့အတူ ကွေးနေအောင် ကခဲ့သူ၊ ဆိုင်းမရှိလို့ မကရရင် ရေဒီယိုလေးပိုက်ပြီး အိပ်ပျော်ခဲ့ရှာသူ မောင်ကျော်မြင့်လွင်။ နတ်စီတဲ့ အိပ်မက်လှလှများကို လွယ်လွယ်နဲ့မရဆိုတဲ့ တရားသဘောကို ပြခဲ့လေသည်လား။
ဤသို့ကဗျာနှင့်နေခဲ့သူ၊ မဟာဂီတသံများကြားမှာ ယဉ်ပါးသာယာနေတတ်သူ၊ ရေဒီယိုလေးနှင့် ငယ်စာရင်းမဖျက်နိုင်ခဲ့သူ
မောင်ကျော်မြင့်လွင်တစ်ယောက် သူ၏ ၈တန်း ကျောင်းသားဘ၀တွင် သူ့အတွက် ကြီးလှစွာသော အချိုးအကွေ့တစ်ခု ဖြစ်ပွားသွား ခဲ့လေသည်။
နွေကျောင်းပိတ်တစ်ခုတွင် ဆွေမျိုးများရှိရာ မော်လမြိုင်သို့ အိမ်လည်ရာမှအပြန် အစ်ကိုဝမ်းကွဲ ကိုအောင်မျိုးဆန်းထံမှ ဂစ်တာဟောင်းလေးတစ်လုံးကို ပုသိမ်သို့ သယ်ဆောင် လာခဲ့ရာမှ အစပြုခဲ့သည်။
သူကား တူရိယာလေးနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကို စကြ၀ဠာသို့ လွှင့်တင်ရင်း ဤကမ္ဘာမြေကို ဖွဲ့သီဖို့ အစပြုခဲ့လေပြီ။
ဖခင်၏ခွင့်ပြုချက်မရသောအဖြစ်၊ ဤတွင် သူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်ဖြစ်သူ ကဗျာဆရာစိုးရိမ်(ကိုအောင်အောင်ကျော်)၊ ကိုဦး(ကိုအောင်ကျော်ဦး)တို့နှင့် အတူ အဖြူရောင်ဂစ်တာလေး၏ စိုးထိတ်ငိုရှိုက်သံ၊ လွတ်လပ်တက်ကြွသံ၊ လွမ်းဖွဲ့ကြိုး၊ လူငယ်တို့ဘာဝ အဖဖြစ်သူနှင့်လည်း အမြင်လွဲချော်ခဲ့ရလေသည်။
‘‘မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းကွာ…အဲဒီလူငယ်ဘ၀မှာ ဂစ်တာတီးရင် တစ်ယောက်လောက် တောင် ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်လို့လား၊ ကျောင်းစာမှာချို့တဲ့သွားနိုင်တယ်လေ၊ အဲဒီတော့ ကျောင်းစာကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်၊ ပြီးတော့မှ တီးချင်ရင်တီး၊ သူ(သားသား) ၁၀တန်းအောင်တော့ ၁၆နှစ်ပြည့်ရုံပဲ ရှိသေးတာပါ။
တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပေါ့ကွာ၊ ဆရာဝန်တို့ အင်ဂျင်နီယာတို့လေ…ဒီလို ဂစ်တာလေးနဲ့ ဟိုသွားလိုက် ဒီသွားလိုက်အစား… မင်း အဖေတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း မင်းဒီလိုပဲခံစားဖြစ်မှာပါကွာ’’
ဤသို့ ဖခင် ဦးထွန်းမြင့်က သူ့သားကြီး၏ ဂီတာလေးအပေါ် ဆွေးမြေ့စွာ အလွမ်း စကားဆိုခဲ့ရှာလေသည်။ သူကား မရပ်နားတော့ပြီ၊ ဂီတသင်္ကေတများနှင့် ရင်းနှီးယဉ်ပါးစေရန် မြို့နယ် လူငယ်ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့သို့ ၀င်ခဲ့လေသည်။
ဆရာဦးကျောက်စိမ်းအမည်ရှိ အပျော်တမ်း အနုပညာရှင်ကြီးတို့ထံတွင် ဂီတသင်္ကေတများ ဆည်းပူးခဲ့သည်။
ပြီးတော့ပုသိမ်၏ အထင်ကရ ‘ငုဝါ’ တီးဝိုင်းတွင် သီချင်းဆိုသူ ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
ဒေသကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးဘ၀တွင် သူသည် ၀ါသနာတူ လူပေလူတေကလေးများ (သူတစ်ပါးကို ဒုက္ခမပေးဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ဒုက္ခလမ်းကို ရှာကြသူများ) နှင့် ပေါင်းဖက်ပြီး ‘အမေ့ရဲ့ဒုက္ခအိုးလေး’ ဖြစ်ဖို့ ကျောင်းစာသင်ခန်းများကို ကျောခိုင်းခဲ့တော့သည်။
ကျောင်းပွဲတွေတီးသည်။ ကဗျာတွေရေးသည်။ သီချင်းတွေရေးသည်။ သီချင်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ အနုပညာနှင့် ပက်သက်လျှင် အခြေအမြစ်ကိုကျ ရေဆုံးရေဖျား လိုက်တတ်သူ ‘သျှပ်မှူးကျော်’ ဖြစ်လာလေသည်။
တစ်အိမ်လုံး ‘မော်လမြိုင်’ ပြန်ပြောင်းသွားပေမယ့် သူ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ပုသိမ်မှာ သူ့အတွက် ကဗျာတွေရှိသည်။
သူနဲ့ဆိုးဖက်တေဖက် ဒုက္ခအိုး အရွယ်စုံရှိသည်။
ပြီးတော့ သူ့မွေးရပ်မြေ၊ ၁၉၈၂-၈၃ ကာလတွင် ပုသိမ်ကောလိပ်ရှိ အဆောင်ညစာစားပွဲများ၊ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲများ၊
နှုတ်ဆက်ညစာစားပွဲများ အားလုံး သူဦးစီးသော Shore of Peace ပဲ ဒိုင်ခံတီးခတ်ခဲ့သည်အထိ သူတို့အုပ်စုအားထုတ်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၄-၈၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ပုသိမ်ရွှေဆိုင်တိးက Sunflower အမည်ရှိ တီးဝိုင်းကို ဦးစီးသူ ကိုအောင်တင်ဦး၊ ကိုအောင်ကျော်ဦး (မောင်ဝိုင်း) တို့နှင့် သူ သီချင်းအရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
ကိုအောင်တင်ဦးရော၊ မောင်ဝိုင်းရော၊ သူတို့အဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်မြတ်ရော၊ အခုတော့ သူ(ကိုကျော်မြင့်လွင်)ပါ မရှိကြတော့ပြီပဲ။
မောင်ဝိုင်းနှင့် အောင်တင်ဦးတို့အိမ်တွင် ကိုနေ၀င်း (မောင့်လပြည့်ဝင်း)က တည်းခိုအခြေပြုနေသည့် ကာလဖြစ်သည်။ ကိုအောင်တင်ဦးက သီချင်းခွေ အသံသွင်းမည်။ သီချင်းတွေဝယ်မည် ဖြစ်လာသည်။
ဤတွင် ပုသိမ်မြို့ရှိ တစ်ဦးတည်းသော ခေတ်ပြိုင်သီချင်းရေးသူ သူ(ကိုသျှပ်)နှင့် အဆင်ပြေခဲ့သည်။ ‘အခါလွန်မိုး’ အပါအ၀င် သီချင်း ၄ပုဒ်ကို ကျပ်တစ်ထောင်နှင့် ရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
‘အခါလွန်တဲ့မိုး’ သည် သူရေးစက သီချင်းနာမည်မရှိသေးချေ။ ပြီးတော့ ဂီတသံစဉ်ကလည်း ယခုကဲ့သို့ မဟုတ်သေး။ သံပြိုင် (Chorus) ပိုဒ်တွင်…‘ခုတော့ ဝေးကြပြီမေ xxx ခုတော့ဝေးကြပြီလေxxx ခုတော့ ဝေးကြပြီ တို့နှစ်ဦးသားxxx နှုတ်ဆက်မျက်ရည်လေးများxxx အားလုံး မသိအောင်သိမ်းထားxxx ပန်းကလေး မနွမ်းအောင်xxx မိုးစက်လေးများအစားxxx သွန်းလောင်းလိုက်ပါလား’ ဟူ၍ဖြစ်သည်။
သူ(သျှပ်မှူးကျော်) အောင်တင်ဦးကို ရောင်းတော့မှ ‘အခါလွန်တဲ့မိုးမို့ အငြိုးနဲ့ရွာ’ ဟူ၍ ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ‘အခါလွန်တဲ့မိုးမို့ အငြိုးနဲ့ရွာ’ ဟူသော သီချင်းစာသားကိုပင် အောင်တင်ဦးတို့က ပြင်ဆင်ချင်သည်ဆို၍ သူနှင့်အကြီးအကျယ် ပြသနာဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
သူသည် သူ့သီချင်း၊ သူ့အနုပညာကို ဘယ်တော့မှ အထိမခံတတ်သူ။
‘ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မရှိဘဲ သိက္ခာရှိချင်သေးသတဲ့’ ဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်။
ခုလည်းပဲ သီချင်းရောင်းခကျပ်တစ်ထောင်တိတိ။ သူဘာလုပ်မည်ထင်ပါသနည်း။
ရန်ကုန်စံရိပ်ငြိမ်မှာနေခဲ့စဉ် ‘ရှုမ၀’ မဂ္ဂဇင်းပါကဗျာအတွက် ရသည့်စာမူခကျပ် ၁၀ ကို ငွေလွှဲဖြင့် မိခင်ကို ဦးဦးဖျားဖျား ကန်တော့ခဲ့သည့် လင်းထက်(၀ါ)သျှပ်မှူးကျော် ခုတစ်ခါဖြင့် ဘာလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
တစ်မြို့လုံးက သူချစ်ခင်သူ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ခေါ်သည်။
ပုသိမ် င၀န်မြစ်ကမ်းဘေးမှ ဖွင့်လှစ်ခါစ ‘သီတာဦး’ အမည်ရှိ
ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်၏ဘားတွင် ကြိုက်တာကို ကြိုက်သလောက်သောက်စေခဲ့သည်။ ကျပ် ၁၀၀၀ ဆိုသည်မှာ ထိုကာလက အတော်များသော ပမာဏ။ ဘီယာတစ်လုံးမှ ၈ ကျပ် ၅၀ ပြား၊ ရမ်တစ်ပက် ၄ ကျပ် ၄၀ ပြား၊ ကျပ် ၁၀၀၀ ကို ကုန်အောင်ကို ပျော်ပွဲဆင်ခဲ့သူပါပင်။ မနက်ဖြန်အတွက် သူ ဂရုမစိုက်။ ဒီလိုနှင့် မော်လမြိုင်နှင့် ရန်ကုန်၊ ပုသိမ် ကူးချည်သန်းချည် သွားနေခဲ့သည်။
ပုသိမ်က သူ့တပည့်တွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီကို စာတွေမကြာမကြာရေးပို့၊ သူကိုယ်တိုင် နှုတ်ဆက်ပွဲများ ရှိသည့် ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လများတွင် ပြန်ပြန်ရောက်ရောက်လာတတ်စမြဲ။ သူပါဝင်တီးခတ် စမြဲဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ဂီတသည်လည်းကောင်း၊ ဂီတာသည်လည်းကောင်း သူနှင့် ဘယ်တော့မှ မကင်းကွာခဲ့သူ ဖြစ်လေသည်။
မော်လမြိုင်သို့ သူအပြီးပြောင်းသွားပေမယ့် သူ့အကြောင်းကို သူပြောပြလို့ သိနေရသည်။ စာတွေထဲက ဖြစ်သည်။ သူသည် တကယ်တော့ Arranger ဂီတစီမံခန့်ခွဲသူသာ ဖြစ်ချင်သူ။ သူကား သီချင်းဆိုသူမဟုတ်။ သီချင်းရေးမည်။ ဂီတတွေ တပ်ဆင်မွမ်းမံပေးမည်။ လှပသော သူ၏ အနုပညာကို သူ တမြိန့်မြိန့် ပီတိကျ ခံစားမည်။ သူက ဒါပါပဲ။ ဒီလိုနှင့် သူပထမဆုံးအသံသွင်းဖြစ်ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ပြောပြ၍ သိခဲ့ရသည်။ သီချင်းဆိုသူမဟုတ်။ တီးခတ်သူ Drummer အဖြစ်နှင့်တဲ့။ Local Talent အစီအစဉ်အတွက် စောခူဆဲ၏ အစီအမံဖြင့် သူတို့ Excellence တီးဝိုင်း အသံသွင်း အတွေ့အကြုံ ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်တွင် သူတို့ တည်ထောင်ခဲ့သည့်ဝိုင်း။ ဂီတာတီးတာက ကိုG.K ဆိုသည့် သီချင်းရေးသမား၊ သူက Drummer… ပထမဆုံး တီးရတာက Clift Richard ရဲ့ Devil Women ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၁ နိုဝင်ဘာမှာ မိသားစု မော်လမြိုင်ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် ပုသိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့သူ သျှပ်မှူးကျော်၊ ခုတော့ မော်လမြိုင်မှာ တီးဝိုင်းထောင်နိုင်တဲ့ကာလ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူ၏ပေးစာများအရ အဆိုတော်တစ်ဦး သူ့သီချင်းတွေကို အလကားတောင်းတဲ့ အကြောင်း၊ ကိုဘွဲ့မှူးတို့နဲ့ ရံပုံငွေပွဲတစ်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ၊ ဆရာဦးအောင်စိုးထံမှာ သီအိုရီ သင်နေတာတွေ သိလာရသည်။ သူ့မှာဘာအခက်အခဲနှင့် နာကျည်းစရာတွေရှိသည် မသိ။ ‘သူဂီတကိုကျောခိုင်းလိုက်ပြီ’ လို့ ပုသိမ်နှင့် ပက်သက်သည့် သူ့မိတ်ဆွေ၊ တပည့်၊ ဆရာများအား ကြေညာခဲ့သေးသည်။ ‘‘သူ ဂီတကို လုံး၀၀ါသနာမပါတော့ဘူး၊ စွန့်လွှတ် လိုက်ပြီ’’ တဲ့။ ဘယ်သူကမှ မယုံကြည်ပါ။ သူကား လိမ်ညာတတ်သူ၊ ကြွားဝါတတ်သူ၊ လျှို့ဝှက်တတ်သူမှ မဟုတ်တာ။ သူက ပြောစရာမကျန်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်သူ၊ လုံးဝ အားမနာတတ်သူ၊ မလိုအပ်လျှင် ဘာမှမပြောတတ်သူပဲ။
ယခု သူမရှိတော့မှ သူ့ရဲ့ကြေကွဲခန်း၊ ပေါက်ကွဲခန်းတွေကို မိခင်ကြီး ဒေါ်မြရင်နှင့် သူ့ညီကိုအောင်မျိုးဟိန်းတို့က ပြောပြမှသိရတော့သည်။ သူသည် သူတစ်ပါး၏ သိက္ခာနှင့် ဂုဏ်သရေကို စောင်ထိန်းသူပဲ ဖြစ်ပါ၏။ ကွယ်လွန်သည်အထိ ထိုအကြောင်းကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မပြောခဲ့ပေ။ သူ(သျှပ်မှူးကျော်) မော်လမြိုင်ပြောင်းကာစ ‘မော်လမြိုင်’ ဂီတရပ်ကွက် အခြေအနေကို သူ့ညီက ဤသို့ ပြောပြလေသည်။
‘‘မော်လမြိုင်မှာက ‘ရွှေ’ဆိုတဲ့တီးဝိုင်းက နာမည်ကြီးတယ်။ နောက် ကိုမြသောင်း (ဂျက်မြသောင်း)ဦးစီးတဲ့ 747 လည်း နာမည်ကြီးပါပဲ။ ကိုလေး (သျှပ်မှူးကျော်)က Bass တီးတယ်၊ G.K (ကိုဗလဆိုခဲ့တဲ့သီချင်း ရေးခဲ့သူ) က ဂစ်တာ၊ ကိုစိုးညွန့် (G.K ရဲ့ ညီ)က ဂစ်တာ၊ Drum က ကိုအောင်စိုး…၊ သူတို့ဝိုင်းက Excellence တဲ့ဗျ၊ အဲဒီ Excellence နဲ့ သီချင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကို…(နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးဗျာ၊ သူလည်းအခုမရှိတော့ဘူး၊ ဆုံးသွားပါပြီ) က ကိုလေး သီချင်းရေးတယ်ဆိုတာကို သိသွားပြီး သူဆိုမယ် ခွေသွင်းမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ခဲ့တာလေ။ အဲဒီကာလက No.No တို့ ‘ခွင့်မပြု’ တို့ပေါ့… ကိုလေးဆိုပြတော့ အသံသွင်းမယ် ဖြစ်လာတာပါ။ ကိုလေးက Parts တွေ ခွဲတော့တယ်။ Aces နဲ့တီးဖို့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကိစ္စက ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူ့အတွက် ကြီးစွာသောရည်မှန်းချက် ပျက်စီးရခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အဲဒီကာလမှာ Excellence က ပျက်သွားပြီး Sharp ဆိုတဲ့ အမည်သစ်၊ ၀ိုင်းသစ် ဖွဲ့ကြတယ်။ ကိုလေးက Lead တီးခဲ့တယ်။ သူ့အနွံအတာ အင်မတန် ခံကြပါတယ်။ သူတို့ဝိုင်းက သီချင်းတိုက်ပြီးရင် အရက်သောက်ကြတာပဲ။ အဲဒီကာလမှာ ခုနခွေကိစ္စ ပျက်သွားတော့ သူ အရမ်းစိတ်ထိခိုက်သွားတော့တာ။ တစ်နေ့တော့ သူတို့သီချင်းတိုက်ပြီး သောက်ကြတော့ ကိုလေးဟာ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ Rum တစ်လုံးလုံးကို တစ်ချက်တည်း သောက်ချလိုက်တာ’’
ဤကား အံ့သြစရာ ဖြစ်ပါသည်။
ပုသိမ်တွင် ဤသို့ အရက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်လွတ်စပယ် သူမသောက်ပါ။
သူ့ရောင်းရင်းတွေအကုန် လဲကုန်ချိန်တောင်မှ သူက ဂီတာလေးနှင့် သီချင်းတီးရင်း ကျန်ခဲ့နိုင်သူပါ။
သူအတော်စိတ်ထိခိုက်လို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ယခုဖြစ်ရပ် အရင်ကရော သူ ဘာတွေကျဆုံးခဲ့ပါသလဲ။ သူက Composer သန့်သန့်လုပ်ချင်သူ၊ သူက Arranger လုပ်မည့်သူ၊ သူက လိုအပ်လျှင် Player ၊ သီချင်းဆိုချင်သူ မဟုတ်တာ သူနှင့်နီးစပ်သူတွေ သိခဲ့သည်။ ဒါတောင်သူက တကယ့်အဆိုကောင်းသူပင်။
မှတ်မိပါသေးသည်။ Shore of Peace အဖွဲ့ဝင် အတီးသမားများ တစ်ယောက် တစ်ပုဒ်စီ သီဆိုပေးပါဟု ပုသိမ်ကောလိပ်မှ ဌာနမှူးများ၊ ပါမောက္ခများ၊ အဆောင်မှူးများက တောင်းဆိုလျှင် တစ်ယောက်တစ်ပုဒ်စီ အနည်းဆုံး ဆိုပေးရသည်။ ဤတွင် သူ (သျှပ်မှူးကျော်)ကား တကယ့်ပီပီပြင်ပြင် ဆိုနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သိရတော့သည်။ သူပထမဆုံး ဆိုခဲ့သည်က ရီတာစိုးဝင်း၏ သီချင်း ၂ ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ‘ပလေးဘွိုင်ရဲ့ ပလေးဘွိုင်’ တေးစုတွင် ပါခဲ့သည့် ‘လျှို့ဝှက်အချစ်’ နှင့် ‘သွားနိုင်တယ်’ ဖြစ်သည်။ နောက် တက္ကသိုလ်အေးမောင်၏ ‘ပုန်းလို့မနေနဲ့ကွယ်’ တို့ ဖြစ်၏။
သူရေးသော သီချင်းများကိုမူ သူ ဘယ်တော့မှ မဆိုပြခဲ့ပေ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ပေးဆိုသည်။ ထိုကာလ ပုသိမ်ကောလိပ်တွင် ‘ဝေးသွားတဲ့အခါ’ အမည်ရှိ သူ့သီချင်းကတော့ အဆောင်ညများ၊ ကန်သုံးဆင့်တစ်ဝိုက်၊ ထိုမှ ပုသိမ်ကောလိပ်ထွက် ဂစ်တာသမား ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ သီချင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်ရောက်မှ ဒီလို သူရမ်အရက်တစ်လုံးလုံး တစ်ခါတည်း သောက်ချပစ်လိုက်သည်တဲ့။ ပြီးတော့… သူ့အမေကို ဘာမှမပြောဖို့မှာရင်း သံလွင်မြစ်ထဲ ဆင်းသွားခဲ့သည်ဟု သိခဲ့ရတော့သည်။ ဤဆောင်းပါး အစပိုင်းက ပါခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း သူ့အမေက သူ့ကို ကယ်တင်ခဲ့လေသည်။
‘‘သူက အရေးသမားပဲ လုပ်ချင်တာ၊ အဆိုသမား မလုပ်ချင်ဘူး၊ အဲဒီမှာ ငါလည်း ရှိစုမဲ့စုလေးတွေ စုပြီးတော့ပေါ့ကွယ်…၊ ရော့…သား… ဆိုပြီး ငွေနှစ်သောင်းခွဲလား မသိဘူး… ပေးလိုက်တော့တာ၊ အဲဒါနဲ့ သူရန်ကုန်ကို တက်ခဲ့တော့တာပဲ’’
မောင်သန်းထွန်းစိုး၊ မောင်ကျော်မြင့်လွင်၊ ကိုဘဲဥ၊ ကိုသျှပ် မှသည် ထူးအိမ်သင် အဖြစ် ခရီးအစပျိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ထူးအိမ်သင်အကြောင်း ဤနေရာတွင် မဖော်ပြတော့ပါ။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတော့ သူ့နာမပညတ်များ မတူခဲ့သလို၊ အခြေအနေ၊ စိတ်ထားများလည်းမတူ တော့ ၍ပင်၊
‘ထူးအိမ်သင်’ ဟူသည်ကား ဖွဲ့သီစရာမလိုသော ‘ကမ္ဘာမြေ၏တေး’။
‘ကမ္ဘာမြေ ငြိမ်းချမ်းပါစေ ပန်းပွင့်တွေ ဆုတောင်းနေ’ ဟူ ၍ သြကာသလောကကို ချစ်မက်တွယ်တာသူ ဖြစ်လေသည်။ သူသည် မည်သည့်ကာလတွင် မည်သို့ဖန်တီးရမည်၊ မည်သို့ဖြည့်ဆည်းရမည်ကို အလွန်သိသူ။
‘‘ဒီပုံက ငါကိုယ်တိုင် ရိုက်ထား၊ ကူးဆေးထားတာ၊ Contact ကူးထားတာကွာ…၊ သားသား(ထူးအိမ်သင်) ၁၃ နှစ် ၁၄ နှစ်လောက် ရှိမှာပေါ့၊ မောင်ဆု (သူ့ညီအငယ်ဆုံး မင်းဆုမွန်) က ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ မွေးတာဆိုတော့ ၈ လသားလောက် ရှိပြီပေါ့။ မတ်တတ် မရပ်နိုင်သေးလို့ နောက်ကနေချီထားရတာ’’ ဟူ ၍
‘‘ဟိုတုန်းကပုသိမ်မှာ ဓာတ်ပုံဆရာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ သမ၀ါယမက ကိုလှမြင့်ရှိတယ်၊
‘မေအောင်’ တို့အဖေ ကြေးမုံဝင်း ကိုတင်ညွှန့်၊
မော်စကိုဗစ်ကားစီးတဲ့ ၀င်းချစ်ဓာတ်ပုံတိုက်က ကိုလှမောင်တို့ပဲ ရှိတာ၊
တို့ပုသိမ် ‘ဗဟို’ ဓာတ်ပုံတိုက်က ကင်မရာတွေဟာ ငါ့ဟာတွေချည်းပဲ။
ဗဟိုပိုင်ရှင် ‘အာသာ’ ဆိုရင် ‘အာသာ ငါ့ကို ကင်မရာ တစ်လုံးပေးစမ်း’ ဆိုရင် ‘ဦးထွန်းမြင့် အဲဒီမှာ ကြိုက်တာယူသွား’ ပဲ အရင်က Flash Gun သိပ်မသုံးသေးဘူကွ’’
လို့ သူရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကိုကြည့်ရင်း ပြောပြရှာသည်။
‘‘သားသားမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်ကွာ… သူနဲ့ငါ တိုင်ပင်ထားတာ တွေရှိတယ်၊ ‘မိုးဇော်ကို’ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဆရာလေးကို သူက Notes သင်ပေးမယ်၊ မိုးဇော်ကိုက သူ့ကို ဆိုင်းဝိုင်းအကြောင်းရှင်းပြပြီး တီးပေးမယ်၊ သူတို့ အဲဒီအစီအစဉ်အတွက် ချိန်းထားကြတာ၊ ဘာမှမကြာသေးဘူး၊ သူဆုံးမယ့်နှစ်ပါပဲ’’
သူတို့၏သား၊ သူတို့၏ အစ်ကိုကြီးကား ‘ထူးအိမ်သင်’ အဖြစ် မိသားစုအတွက်သာမက၊ မြန်မာပြည်အတွက်၊ ထိုမှတစ်ဝ ကမ္ဘာမြေအတွက် သီချင်းများ၊ အနုပညာများ၊ နှလုံးသားများစွာအတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ပေးဆပ်သူဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
‘‘သြော်… ဒီသားကို မွေးရကျိုးနပ်ပါတယ်ကွာ၊ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်ကာလက နည်းလွန်းအားကြီးပါတယ်ကွာ… လူတစ်ယောက်အတွက် အနည်းဆုံးတော့ အသက် ၅၀ လောက်နေရရင် တော်သေးတာပေါ့လေ… ခုဟာက ၄၀ ပြည့်ရုံလေး ရှိသေးတာ ပြီးတော့ ငါတို့ သူ့ကို စိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိ မပြုစုလိုက်ရဘူး’’
‘‘ငါ နားမယ်ဆိုရင်… နားလို့ရပြီ… ငါ ပုသိမ်မှာ ခြံလေးတစ်ခြံဝယ်ပြီး ကလေးတွေကို Music သင်ပေးမယ်ကွာ’’ လို့ ပြောခဲ့ရှာသူကား အေးချမ်းငြိမ်းသက်စွာ သံသရာ ခရီးရှည်ကြီးကို ထွက်ခွာသွားရှာလေပြီ၊
‘သံလွင်’ က တရားပြ၊ တရားချတာကို လက်ခံခဲ့သူ၊
‘င၀န်’ က ထွေးပွေ့ခဲ့သူ၊
‘ဧရာဝတီ’ ကို တပ်မက်ခဲ့သူအတွက် သူ့စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ ဂုဏ်ပြု ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။
‘‘ငါတို့က အဆိပ်ပြင်းတဲ့၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အကောင်တစ်ကောင်နဲ့ နေရမှ အရသာရှိတာကွ၊ ဒီအကောင်၊ ဒီအရာကို တို့နိုင်နေရရင် ဘယ်လောက် အရသာရှိသလဲ’’ ဟူသတည်း။
သူသည် အဆုံးစွန်အထိ အကြောက်အလန့်မရှိသူ၊ အန္တရာယ်ကိုတောင် အရသာခံတတ်၊ အလှရှာတတ်သူပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:00 PM No comments:
Air France plane missing (4)
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:41 AM No comments:
ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဓနုတ် စေတီတော် ကြီး ပြိုကျ
ဒလ မြို့ နယ်ရှိနှစ်၂၃၀၀ သက်တမ်းရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဓနုတ် စေတီတော် ကြီးမှာ မေ လ ၃၀ ရက်နေ့ နေ့ လည် ၂ နာရီ အချိန်ခန့် ကစေတီ တော်ကြီး၏ ထီးတော် နေရာမှ စတင်ပြိုကျကာ မိနစ်အနည်းငယ် အတွင်းစေတီ တော်တစ်ခုလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့သည်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ် ဓနုတ်စံပြကျေးရွာရှိ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဆံတော်ရှင် ဓနုတ်စေတီတော်ကြီး ယမန်နေ့က ပြိုကျသွား သဖြင့် လူပေါင်း (၅၀) ကျော် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိပြီး မြေပိနေသူများစွာရှိနေသေးကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ များက ပြောသည်။
စေတီတော်ကြီအနီး ဓနုတ်ကျေးရွာနေ အဖွားအိုတဦးက “ ဖြစ်ပုံက မနေ့က မွန်းလွဲပိုင်း (၂) နာရီလောက်မှာ လေလည်းမတိုက်ပါဘဲနဲ့ ထီးတော်က အရင်ကျိုးကျသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စေတီကြီးအပြီးသတ် မွမ်းမံရေးအတွက် ငြမ်းတွေပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေက ကျိုးကျသွားတဲ့ ထီးတော်ကို ပြန်ပြီးတည့်မတ်ဖို့၊ တခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ မကြာပါဘူး၊ (၁၀) မိနစ်လောက်ပဲ ရှိတယ်၊ ဝေါကနဲဆိုတဲ့အသံကြီးနဲ့ ဘုရားကိုယ်ထည်ကြီးတခုလုံး ပြိုကျသွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ဖုံမှုန့်တွေနဲ့ မှောင်ကျသွားတယ်။
ဓနုတ်စေတီတောကြီးမှာ ၂၇ .၆ .၂၀၀၆ ခုနှစ်က တစ်ခါပြိုကျခဲ့ပြီး ၊နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ် အချိန်ကတစ်ခါ နှင့် ယခု တစ်ခါသုံးထပ်မံပြိုကျခြင်းဖြစ်သည်။စေတီတော် မှ ဂေါပက တစ်ဦး၏ပြောပြချက်အရ ထိုစေတီတော်ကြီးကို ထပ်မံတည် ထားသည့် ဟံသာဝတီ မင်း ဗညားဦးမှာ သားဖြစ်သူဗညားနွဲ့(ရာဇဓိရာင်္ဇ )ပုန်ကန်မှုကြောင့် အရေးမလှဖြစ်နေစဉ် တွင် တစ်ခါပြိုကျသည် ဟုဆိုသည်။ဗညားဦး သည် မဂဒူးတည် ထောင်ခဲ့သော မုတ္တမ နန်းနေရာကို ဟံသာဝတီ သို့ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့သူဖြစ်သည်။
မှ ရ ယူ သည်။
'There's beenafailure'(3)
Flight path of missing airliner(2)
Passenger plane missing (1)
ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့လူ...
မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည်ရန် ကာကွယ်ဖို့ အမေရိကန် အသ...
Swatch Spring-Summer Collection 2009(Tokyo ...Ginz...
Embedded video from CNN Video Embedded video from ...
တီယန်နန်မင်မှာ သေဆုံးသူခဲ့သူစာရင်း ထုတ်ပေးဖို့ အမေ...
ပျောက်ဆုံး ပြင်သစ်လေယာဉ်ကလို့ ယူဆရတဲ့ အပိုင်းအစတချ...
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းလွင...
မြစ်မင်းတွေကို ချစ်ခြင်းဖွဲ့လေသူ မှော်ဆရာတစ်ယောက်ရ...